စာမျက်နှာတွေ့မ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ တွေ့မ "စာမျက်နှာ - သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု2သြဂုတ်လ 2019
ဒူး၏ osteoarthritis ဖြေလျှော့ဖို့3လေ့ကျင့်ခန်း
ဒူး osteoarthritis အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးသောမိန်းမတို့အကြား, ဒီပူးတွဲအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဇုန်၏တိုးတက်သော wear ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အရိုးနုတစ်ရှူးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့လိမ့်မည် ...
သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအစားအစာအမှားတွေကျူးလွန်နိုင်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ကြသူတောင်မှလူကျန်းမာဘဝကိုဦးတည်သွားစေနှင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအကြီးနေရာချနေသောသူတယောက်ဆိုရင် ...
သေးငယ်တဲ့ကျိုးကစျေးမှာ၏ရလဒ်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲအရိုးထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုကျိုးအကြောင်းပြောဆို။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အသုံးအများဆုံးအကြောင်းမရှိထပ်တလဲလဲရွေ့လျားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာတိုး၏သဘောပေါက်သည် ...
neuralgia နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်3ကုစား
Neuralgia ဦးခေါင်း, မျက်နှာသို့မဟုတ်လည်ပင်းမှထိတ်လန့်နေတဲ့မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်တဲ့အာရုံခံရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအလွန်နာကျင်ခွအေနအေ။ ဤဆောင်းပါး၏ကျန်ရှိသောတှငျကြှနျုပျတို့ထံမှ neuralgia ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ် ...
မည်သည့်အင်ဂျင်လိုပဲဦးနှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေပါသည်။ ကျနော်တို့အနာဂတ်၌ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေကိုအဘယျသို့အရှိဆုံးကာကွယ်တားဆီးဖို့သင်ယူရပါမည် ...
Prozac က Psychiatry အတွက်အထူးပြုမဟုတ်သောဆေးသမားသတ်မှတ်စေခြင်းငှါပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေးသောကွောငျ့, စိတ်ကျရောဂါ၏ကုသမှုတော်လှန်ခြင်းမူကြောင်းကိုလက္ခဏာ fluoxetine အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ 1988 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ, Lilly ဆေးဝါးဖြန့်ချိ ...
ဘိုဟိုက်ဒရိတ်၏6သတင်းရင်းမြစ်ဆူအောင်ကျွေးသောမဟုတ်
ဘယ်အချိန်မှာကျနော်တို့အစားအစာ, ငါတို့ပြုပါပထမဦးဆုံးအရာမုန့်, ခေါက်ဆွဲသို့မဟုတ်ဆန်ကျွန်တော်တို့ကိုရှုံးစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ထိုသို့လိုအပ်သောနှင့်ထိရောက်သောတကယ်ဖြစ်သနည်း အားလုံးဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုအလေးခြိနျရရှိစေပါသလား? ...
တစ်ဦးကဆွဲထုတ်ကြွက်သား, လေ့လူသိများကြွက်သား strain, အ myotendinous လမ်းဆုံများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အမျက်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကြွက်သားနှင့်အရွတ်များအကြားအကူးအပြောင်းဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကြွက်သားတစ်ဦးလမ်းပိုင်းအကြောင်းမဲ့အခါဒါဟာဖြစ်ပေါ် ...
ဝမ်းဗိုက်အလုပ်လုပ်5ယောဂကိုယ်ဟန်အနေအထား
သငျသညျအခြို့သောယောဂကိုယ်ဟန်အနေအထားဝမ်းဗိုက်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမြဲမြံစွာနဲ့ပုံသဏ္ဍာန် ABS ရှိသည်ဖို့ကူညီနိုင်သည်ကိုသိပါသလော အဆိုပါ silhouette ၏ပန်းပုဒီစည်းကမ်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်များ၏တဦးတည်းမဟုတ်ပေမယ့် ...
နေ့လည်ကော်ဖီသောက်နှငျ့ကောငျးသောအိမ်လုပ်အချိုပွဲထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှ။ သငျသညျဂျင်းနှင့်အတူအရသာစက်ဝိုင်း၏အဘယျထင်ပါသလဲ တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်လိုက်ပါသွား, တကမွေ့လျော်ကြလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့! သာဂျင်းရုံနှင့်အတူ Pie ...
စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် anorgasmia အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး
အဆိုပါ anorgasmia လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်ရရှိအတွက်အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်အခက်အခဲအောင်မြင်ရန်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတိကျတဲ့အခြေအနေများသို့မဟုတ်နေရာအနှံ့မျက်နှာ၌မည်သည့်အခြေအနေသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤသည်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကောင်းစွာ may ...
La reine exposée aux plus récentes & # 039; armes & # 039; La technologie dit expert – “problème majeur de sécurité” & # 039;